Maamulka degmada Xamar-jajab ee gobolka Banaadir oo dadaal ku bixinaya soo celinta bilicda deegaanka - Hargeele - Wararka Somali State
Maamulka degmada Xamar-jajab ee gobolka Banaadir oo dadaal ku bixinaya soo celinta bilicda deegaanka
Muqdisho.(SONNA):- Maamulka degmada Xamar-jajab ee Gobolka Banaadir ayaa wada olole nadaafeed oo dib loogu soo celinayo bilicda xaafadaha kala duwan ee ay ka kooban tahay degmadaas.
Bulshada qeybaheeda kala duwan oo leh Haween iyo rag oo uu wehlinayo guddoomiyaha degmada Xamar-jajab Mudane Guhaad Sheikh Xasan ayaa xalay howlo dib loogu soo celinayo bilicda laguna ilaalinayo nadaafadda degmada waxay ka sameeyeen Isgoyska Ceel-gaabta ilaa iyo isgoyka Afisyoone degmada Xamar-jajab ee Gobolka Banaadir.
Wadadaan ayaa dhowr jeer oo hore laga sameeyay howlo nadaafadeed,balse waxaa soo noq noqday Biyaha wasaqda ah oo xilliyada habeenkii ay ku shubaan dadka ku ganacsada hareeraha wadada.
Guddoomiyaha degmada Xamar-jajab Guhaad Sheikh Xasan ayaa shacabka degmada gaar ahaan Ganacsatada ugu digay iney waxyaabaha aan u wanaagsaneyn bilicda iyo caafimaad qabka dadka ay ku shubaan wadada iyo goobaha kale ee danta guud.
“Tiro dhowr jeer ah oo aan nadiifinayna waxay ku soo baxday si fiican oo nadiif ah,balse wuxuu culeys ka yimid dhanka goobaha ganacsiga oo nala garan waa maadaama habeenkii aan nadiifineyno in iyagana maalintii ay ka ilaaliyaan wasaqda,” ayuu yiri guddoomiye Guhaad.
Ugu dambeyntii, Guddoomiye Guhaad Sheikh Xasan ayaa Bulshada degmada Xamar Jajab ugu baaqay iney lagama maarmaan ay tahay ilaalinta deegaanka iyo bilicda intaba.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa dadaal ku bixinaya sidii loo hagaajin lahaa nadaafadda dibna loogu soo celin lahaa bilicda caasimadda si ay ula tartanto dhiggeeda caalamka.
Kooxda Juventus oo Manchester United & Liverpool kula tartamaysa saxiixa Torres… (Kaad moodo maaha)
Maleeshiyada Al-Shabaab oo iskaga baxay Gobolka Mudug
Corona Virus oo Caalamka ku dilay in ka badan160.000 Qof
Wasiirka Xanaanada Xoolaha oo ka qayb galay shirka Caalamiga ah ee Cuntada iyo Beeraha oo lagu qabtay dalka Jarmalka “SAWIRRO”
Madaxweynaha Puntland oo ka Tacsiyadeeyey Geeridii ku timid AUN Marxuum Danjire Axmed Keyse